सोचकीका होटल र होचीमा ईन्टरगेडिया, समीक्षा, समीक्षा, फोटोहरू बिना, ह्युचुयूगाबिना समीक्षाहरू, समीक्षा, समीक्षा, फोटोहरू बिना। तिमी.त्य
होटल सेवाहरू "IMERERRERTINSYYSY" SOCHI
बच्चाहरूको लागि विशेष प्रस्तावहरू
अन्य फुर्सत विकल्पहरू
युवा अतिथिहरूको लागि
बच्चाहरूसँग छुट्टिहरू सहज हुनुपर्दछ!
हामी जहिले हाम्रो साना पाहुना र उनीहरूको उत्तम छुट्टीको ख्याल राख्छौं। यहाँ हामीले के गर्न सक्दछौं भन्ने बारे हामीले सबै जानकारी स collected ्कलन गरेका छौं र रिसोर्टमा बच्चाहरूसँग जानका लागि। IMERRRITINSKY मा बिताएको समय, ज्वय प्रभावहरू, स्पष्ट प्रभावहरू, सकारात्मक भावनाहरू र चाखलाग्दो घटनाहरू द्वारा सम्झना हुनेछ!
साना ग्राहकहरू सौन्दर्य सलुनमा पर्खिरहेका छन्। अनुभवी ह्याइर्ड्रेजरहरूले कुनै कपाल कटुले एक केटी, एक बच्चा र अन्य धेरैको लागि स्टाइलिश क्यानेडियालीको लागि फैशनेबल लामो बब प्रदर्शन गर्दछ। बच्चाहरूको मनिजरे र पेडीक्युलेका मालिकहरूले बच्चाहरूको न nails हरू नेतृत्व गर्छन्। केबिनमा, प्रीमियम गुणवत्ता को एक साधन र सामान प्रयोग गरिन्छ, ग्राहकहरु को सुरक्षा लाई धेरै ध्यान दिईन्छ।
<< p> तपाईं आफ्नो छोरा वा छोरीलाई अनुभवी र जिम्मेवार नर्सलाई सुम्पाउन सक्नुहुन्छ। साहसी भई दीर्घकालीन भ्रमणमा जानुहोस् वा बेलुका रेस्टुरेन्टमा। नानी बच्चाको ख्याल राख्छ, किशोरावस्थादेखि एउटा चाखलाग्दो पाठ पाउँदछ। तपाईका बच्चाहरू पूर्ण हुनेछन् र समय बिताउँनेछन्।
कल 8 800 707 77 22 77 22 77 22 वा करिब 80000,000 (कोठाबाट) एक घण्टा वा लामो अवधिको लागि भरपर्दो पर्यवेक्षण
Pi> pibunt prabing (2 24 हेक्टर भन्दा बढी!)। / LI>
खेल क्षेत्र: ट्र्याम्पोलिन, सक्रिय खेलहरू, पोखरीहरूको लागि खेल मैदानहरू।
बाइक सवारी, फ्यूज, स्कूटर र स्केटबोर्डहरू (सबै आवश्यक सूची र व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरू प्रदान गरिएको छ)। / LI>
लगातार बच्चाहरूको फुटबल स्कूल अपरेटिंग।
आधुनिक इलेक्ट्रोनिक मनोरन्जन: विशेष चयन गरिएको फिल्महरू, स्लट मेशिन, शूटिंग ग्यालरी हेर्नुहोस्।
सुपरहीरो स्कूल। / LI>
परिवार बिदाको साथ सचिकी पार्क होटेलको साथ "2020-2021 को गर्मीमा पूरै परिवारलाई आराम गर्ने ठूलो अवसर हो। सोची पार्क होची होची होटल (एडलर, imigretic रिसोर्ट) को सर्तहरूको बारेमा सबै हालको जानकारी पत्ता लगाउनुहोस्। यसका पाहुनाहरूको लागि, यहाँ हुन सक्छ - होटलको आधिकारिक वेबसाइटमा। तपाईं कोठाहरू पनि रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले छुट्टीमा पढेका र छुट्टीमा पढेका समीक्षाहरू पढ्नु भएको छ, जुन होटल भ्रमण गर्नुभयो।
होटल स्थिति पूर्ण परिवारको लागि होटेलको रूपमा, त्यसैले तपाईं एक बर्षको लागि नयाँ प्रभावहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। होटलको मुख्य चिपहरू साना पाहुनाहरूका लागि विस्तृत चिन्ता हो र रमाईलो र रमाईलो शपिटको लागि उनीहरूलाई सब भन्दा सहज र सुरक्षित अवस्थामा प्रदान गर्दछ।
sochi होटल सोची पार्क होटेलले बच्चाहरूको लागि सेवाहरूको मानक प्याकेज मात्र नभई धेरै विशेष छुट्टीको विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।
P> P> Proping योजनाको छुट्टिहरु बिन्याका हुनु हुँदैन डराउनु पर्ने डराउनु पर्छ र आमाहरू बोरिंग हुनेछ। जबकि तपाईंको बच्चा व्यस्त छ, तपाईं समय खर्च गर्न सक्नुहुनेछ: एक विशेष स्पा केन्द्र हेर्नुहोस्, एक मसाज कोठा वा धेरै बारहरू।
घटनाहरू होटलले आफ्नो पाहुनाहरूलाई सब भन्दा फरक हुन सक्छ। यदि सक्रिय विश्राम को विकल्प तपाईंको बच्चा मनपर्दैन भने, उसले आफूलाई एक शान्त तरीकाले लिन सक्षम हुनेछ। र यो कुनै कम रमाईलो हुनेछैन!
बच्चाको साथ आराम गर्नुहोस् सामान्यतया केही घरेलु कठिनाइहरूको साथ संयोजन गर्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईंको बच्चा अझै सानो छ भने। यो बुझ्दै, सोची होटेल पार्कका कर्मचारीहरूले होटलमा रहेका सबै कुराहरू सबै कुरा सुनिश्चित गर्न सबै कुरा गरे।
<< plo होटल लगातार उच्च छ, किनकि सबैभन्दा लाभदायक तातो मौसम कोठाहरू कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कारण। तसर्थ, हामी बुकिंग सेवाको सेवाहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं।
हामी डल्फिनको "स्टार स्टार" वा "पानी" मा डल्फिनसँग परिचित छौं। / LI>
आर्ब्रेटममा दुर्लभ जनावरहरू र चराहरू हेर्नुहोस्, जबकि एकै समयमा हरियो ट्रेजरीको सुन्दर दृश्यहरूको आनन्द लिइरहेका छन्।
गायन झरनाले दुबै साना यात्रीहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूको आनन्द लिनेछ। / LI>
बाँदर केनेल, सोची सर्कस, ओपनरियम र वाटरपार्कले निश्चित रूपमा बच्चाहरू मन पराउँछन्! <
बच्चाहरूसँगको सुची रमाइलो, धनी र आकर्षक हुनुपर्दछ। निको पार्ने समुद्री नुहाई, हावामा वायु र phytontermides सँग संतृप्त, विशेष गरी सौर "गर्मी" -देखि अक्टुबरसम्म आउँदछ। र अरू कुनै पनि अवधिमा, विशेष वातावरणले सुधारमा योगदान पुर्याउँछ, एक हार्डवेयर र एक राम्रो पक्ष प्रभाव पार्नेछ।
थोरै यात्रुहरू फ्याईटिक फ्लोरा, आश्चर्यजनक एक्वेरियम, चिडियाखाना, वा डल्फिनरियममा धनिएको विशाल कथाहरूको कारउजबाट रमाइलो हुनेछ। र तपाईं एक चाखलाग्दो समुद्र हिंड्न सक्नुहुन्छ वा एक चाखलाग्दो समुद्र पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, हिउँद पानी झरना, र भूमिगत संसारमा दर्शानीको साथ, कुनै श doubts ्का बाहिर, कुनै श doubts ्का बाहिर, कुनै श doubts ्का बाहिर, एक श doubts ्का बाहिर, एक श doubts ्ली बाहिर, कुनै श doubts ्का बाहिर varnsuse "ड्रेनस्टा घाटी मा हेर्नुहोस्। ढकढक्याउँदै।
को लागी आकर्षक उद्घाटन<
एक सुन्दर शहरमा, अद्वितीय फ्रास र सफा बेर्लेटहरूमा त्यहाँ धेरै स्थानहरू छन् जहाँ तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ र बच्चाहरूसँग रमाइलो गर्नुहोस्:
योजना पूर्व-एक्स्सन र मनोरन्जन, रिसोर्ट शहरमा बस्न को ख्याल राख्नु आवश्यक छ। सोचीमा एक परिवार छुट्टीको पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न, यो सुविधाजनक आवासको पूर्व-रिजर्भ गर्न उत्तम हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि बच्चा एक निराधार छ, आरामदायक छ कि हिंड्ने दूरीमा समुद्र, समुद्र तट, अधिकतम मनोरन्जन र अप्रिय संवेदनाहरू छन्।
Sochi होटेलहरू विविध सेवा प्रदान गर्दछ, तर यदि तपाइँ लक्जरीको वातावरणलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने, किनभने सान्त्वना, रमाईलो मूड र धेरै आश्चर्यजनक अवसरहरू दिन तयार छ निकटता नजिकको मनोरन्जन। तपाईं व्यक्तिगत रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि यो होटल विशेष छ, र कोठाको प्रस्तावित दायराले तपाईंलाई आफ्नै लागि सब भन्दा सुविधाजनक विकल्प छनौट गर्न अनुमति दिनेछ।
बच्चाहरु संग सोची मा एक महान रहन छ र कुनै सुविधाजनक समयमा तट संग पैदल यात्रा गर्न को लागी एक अद्भुत अवसर हो। थप रूपमा, साना पर्यटकहरूले निश्चित रूपमा रिभिरी पार्क भ्रमण गर्न चाहन्छन्, जहाँ त्यहाँ "डराउने महल" र धेरै अन्य मनोरन्जन गर्ने आकर्षणहरू छन्। हो, र बच्चाहरूको ध्यानको लागि योग्य अन्य आकर्षणहरू डल्फिन होटिकको छेउमा अवस्थित छन्।
<< p> जसले समुद्री पानी र निजी बीचको बाहिरी पोखरी मन पराउँछन्, होटलले स्किपिंग प्रदान गर्दछ। र उत्तम रेस्टुरेन्टमा, होटेललाई सँधै स्वादिष्ट र बच्चालाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ, र त्यसपछि रमाईलो गर्न जारी राख्नुहोस्: बच्चाहरूले बोर गरे कि त्यहाँ सबै कुराहरू छन्।
विश्रामको छाप कोर्नबड, र बच्चाहरूको लागि शानदार हुनुपर्दछ। "डल्फिन" छनौट गरेर, तपाईं पूर्ण बनेको परिवार बिदाका लागि सबै सर्तहरू पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं भावनाहरूको सागरमा डुब्न चाहनुहुन्छ र तपाईंको सानो चमत्कारलाई सबैभन्दा अविस्मरणीय प्रभावहरू दिनुहोस्, सोचीको यात्रालाई फुर्सदको छनौट गर्नुहोस्। बच्चाहरूसँग छुट्टिहरू नि: शुल्क रमाईलो, आकर्षक र जानकारीमूलक छन्!